UKUTSIBA KWIKHAYA YAMANDULO ASSISI PERFETTA LETIZIA - I-Airbnb
UKUTSIBA KWIKHAYA YAMANDULO ASSISI PERFETTA LETIZIA
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguMaria Letizia
UMaria Letizia yi-Superhost
Kumbindi wesixeko samandulo saseRoma i-Assium, phakathi kwebala lemidlalo yeqonga eliqaqambileyo kunye neqonga lemiboniso, apho izitrato ezimxinwa ezinezithuba ezinomtsalane zihamba phakathi kweendonga, iivazi ezineentyatyambo, izinyuko eziphotheneyo, iigadi, iindonga zamatye, kunye nekhaya elitofotofo lisamile. Ukuhlalwa ukususela ekuqaleni kwexesha yintsapho ehloniphekileyo, isekho namhlanje ihonjiswe yigadi emangalisayo kunye nenkulu enombono omangalisayo weRocca eqaqambileyo kunye nentlambo enzulu yonke: esi sisakhiwo sethu.
PERFETTA LETIZIA HOLIDAY HOME kumbindi wedolophu endala
Ukungena endlwini, uyakwamkela kwigumbi lokuhlala eliqaqambileyo nelindilisekileyo elinemiqadi yeplanga eveziweyo, i-arches kunye neendonga zamatye zase-Assisi kwiinkulungwane zamandulo: ngoko nangoko uqonde ukuba kukho iinkulungwane ezidlulileyo zembali kunye nexesha libonakala limiswe ngokungaqhelekanga ukuba bekungenjalo ngenxa yesinye. ubukho bayo yonke intuthuzelo.
Emva koko ungena egadini apho ubethe itafile entle yebhastile, izitulo zentsimbi ezenziweyo uphando, ulandelelwano olungaqhelekanga lwamatye amadala, uhlaza lwengca, ifonti engaguqukiyo evela kwinkulungwane yeshumi elinesibini, umbono omangalisayo wentlambo, intliziyo. yomlingo onomtsalane i-Umbria apho iAssisi iyeyona perile ixabisekileyo.
Iforamu, isekisi, ibala lemidlalo yeqonga, idomus enemifanekiso yazo emihle, inqaba yomngcwabo yePetronas Gens Assisi ifihla iPompeii encinane isenjalo, njengoko isixeko samaxesha aphakathi esalandelayo sakhiwa phezu okanye kufutshane neentsalela zeso saseRoma.
Yonke into ihlanjwe ngoxolo, imvisiswano kunye nomoya ongaqondakaliyo olawula kwisixeko saseFrancis: njengokungathi ngomlingo, ixesha liyayeka kwaye iphupha liba yinyani.
Indlu, ebekwe kumgangatho ophantsi, i-ristrutturatissima kwaye yamkelekile ngokungaqhelekanga, ifakwe kakuhle kwaye ihonjiswe ngemizobo emihle epeyintwe ngesandla, inekhitshi eligcwele izitya, ifriji, ifriji, isitovu kunye ne-oveni, igumbi lokulala elinomtsalane elinebhedi etofotofo i-wardrobe enkulu; igumbi lokuhlambela eliphangaleleyo nelihle elineshawa kunye nebhafu kunye negumbi lokuhlala elikhulu elinendawo yothando yothando kunye neebhedi ezimbini zesofa, nganye kuzo inokuhlala abantu ababini (iibhedi ezi-6 zizonke, ezimbini kwigumbi lokulala kunye nezine kwibhedi ekhululekileyo yeesofa).
Ixhotyiswe ngomatshini wokuhlamba, isinyithi, i-dryer dryer, i-hair dryer, i-LCD TV, i-intanethi ye-WI-FI, indlu inokufumaneka kwendawo yokupaka yamahhala.
Ukufudumeza kuzimele kwaye kufakwe kwixabiso. Kwakhona zibandakanyiwe eziluncedo ezahlukeneyo kunye neelinen zasekhitshini, ibhedi kunye nebhafu, kunye nokucoca kokugqibela.
Isakhiwo sikwaxhotyiswe ngokukodwa kubantwana abancinci: Ibhedi ekhoyo yokuhamba, i-steriliser, itafile encinci enezitulo ezincinci kunye nethala leencwadi labantwana !!!
Ilifa lemveli, iPerfetta Letizia Casa Vacanza 1 yindawo efanelekileyo yokuhlala kwabo bafuna ukuphila amaphupha osuku!
2 iibhedi ezilala abantu ababini, isofa ekwayibhedi eyi-1
4.88 out of 5 stars from 591 reviews
4.88 · Izimvo eziyi-591
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi591
Amanyathelo ambalwa ukusuka kwindlu kukho imivalo, iindawo zokutyela kunye neepizzerias kwaye indawo ephakathi ayivumeli nje ukutyelela i-Assisi emini, kodwa kwakhona ukufumana umoya we-Assisi ebusuku!
Okumangalisayo kwaye kuyingqayizivele embindini we-Assisi yindawo yokupaka yasimahla kumgama ozimitha ezimbalwa ukusuka kwindlu yethu!
I-Perfetta Letizia Casa Vacanze (ikhaya leeholide leLetizia egqibeleleyo) ime kwindawo yaseRoma ngaphakathi kweendonga zamandulo phakathi kweAssisi Rocca emangalisayo kunye nethiyetha enomtsalane yaseRoma, iimitha nje ezili-100 ukusuka kwicathedral yaseSan Rufino, iimitha ezingama-300 ukusuka kwiBasilica yaseSanta Chiara kunye ne900. Iimitha ukusuka kwiBasilica yaseSaint Francis.
Umbuki zindwendwe ngu- Maria Letizia
Siya kufumaneka kwiindwendwe ngayo yonke imfuno, sihlangabezana neemfuno ezahlukeneyo ze-ceck kunye ne-ceck out.
Kuyenzeka, eneneni, ukushiya iisutikheyisi kwangethuba, kwangoko ngentsimbi ye-11.00 kusasa ngomhla we-ceck kwaye uzigcine kwindawo yokugcina kude kube ngu-2.00 emva kwemini ngosuku lokuphuma. Kwimeko apho kufuneka ugcine iibhegi zakho ixesha elide emva kokuba i-ceck iphumile, sizama ukuzilungiselela.
Sikulindele ngovuyo olukhulu ... ukukunika iholide yephupha!
Kuyenzeka, eneneni, ukushiya iisutikheyisi kwangethuba, kwango…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Assisi